Ọnụ ego ndị na -emepụta ụgbọ ala zuru ụwa ọnụ na -arị elu karịa ndị na -ere ahịa mgbawa China na -arị elu
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ọnụ ego ndị na -emepụta ụgbọ ala zuru ụwa ọnụ na -arị elu karịa ndị na -ere ahịa mgbawa China na -arị elu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ụkọ ihe mgbawa zuru ụwa ọnụ enweela nnukwu mmetụta ọjọọ, na -emetụta ndị na -anya ụgbọ ala n'ofe ụwa niile. Nsogbu a, nke bilitere na nkeji nke abụọ nke 2020 n'ihi ikike siri ike na ntọala na ịrị elu na-achọ ndị semiconductor na mpaghara ndị ọzọ dị ka 5G, ka njọ site n'ịbawanye enweghị mgbagwoju anya na-efe efe na-efe efe COVID-19.
A tara ndị nkesa mgbawa China ụgwọ maka ịrị elu ọnụ ahịa.
Ndị na -ere ahịa Chip welitere ọnụ ahịa ugboro 40 karịa ọnụ ahịa ịzụrụ.
Onye na -achị China na -amanye ntaramahụhụ $ 388,000.
Ọchịchị steeti China maka iwu ahịa (SAMR) nwere ntaramahụhụ ndị na-ere ihe mgbaaka atọ nde 2.5 ($ 388,000) maka ịrị elu ọnụ ahịa n'etiti ụkọ semiconductor zuru ụwa ọnụ nke na-emebi ụlọ ọrụ ụgbọ ala zuru ụwa ọnụ.
Onye na -ahụ maka ahịa kacha elu na mba ahụ tiri ntaramahụhụ na Shanghai Cheter, Shanghai Chengsheng Industrial na Shenzhen Yuchang Teknụzụ mgbe nyocha, nke onye nrụpụta bidoro n'ọnwa Ọgọst, kpughere na ndị na -ere mgbawa butere ọnụ ahịa mgbazinye ụgbọ ala ruo ihe ruru 4000% karịa ọnụ ahịa ịzụrụ.
"SAMR ga -aga n'ihu na -a closea ntị nke ọma na ndepụta ọnụahịa mgbawa, bulie nleba anya nke ọnụ ahịa, ma mebie ihe iwu na -akwadoghị dị ka ịkwakọba na ịkwalite ọnụ ahịa iji dobe usoro ahịa nke ahịa, "onye nhazi ahụ kwuru na nkwupụta.
N'ahịa nwere nnweta na mkpa ziri ezi, ọnụego akara nke ndị na-ere ahịa mgbawa na-adịkarị n'etiti 7% na 10%, dị ka ndị nche si kwuo. SAMR mere ka ọ pụta ìhè na mkpagharị ahụ dị egwu kpalitere ịchekwa egwu n'etiti ndị na-emepụta ihe na ndị na-anya ụgbọ ala, na-eme ka ahaghị njupụta chọrọ dị na ya wee na-ebute mmụba ọzọ na ọnụ ahịa.
Ụkọ ihe mgbawa zuru ụwa ọnụ enweela nnukwu mmetụta ọjọọ, na -emetụta ndị na -anya ụgbọ ala n'ofe ụwa niile. Nsogbu a, nke bilitere na nkeji nke abụọ nke 2020 n'ihi ikike siri ike na ntọala na ịrị elu na -achọ ndị semiconductor na mpaghara ndị ọzọ dị ka 5G, ka njọ site n'ịbawanye enweghị ntụkwasị obi gbara ya gburugburu. Oria ojoo COVID-19.
Ndị ọchịchị China na -achọ ibelata nrụgide na mpaghara ụgbọ ala nke a na -akọ na ọ bụ ụgbọ ala atọ ọ bụla arụpụtara n'ụwa.
Ụlọ ọrụ na-emepụta ụgbọ ala China, nke kacha ibu n'ụwa maka mmanụ ụgbọ ala na mmanụ eletrik, nwere nnukwu nsogbu n'ihi ụkọ ụwa. Dị ka data gọọmentị si kwuo, obodo a dabere na mbubata ihe karịrị 90% nke ngwaahịa semiconductor ya.
Dabere na data nke SAMR sochiri, mmepụta ụgbọ ala ndị njem na June hụrụ ọdịda nke ọnwa karịa 3.8%, ebe ahịa gbadara 4.7%.